Gini mere Jakarta ji emikpu? Anyị na-akọwara gị ihe niile | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị maara na mgbanwe ihu igwe bụ otu n'ime ọdachi kachasị dị egwu n'ụwa na-eche ụmụ mmadụ na narị afọ a. Jakarta aghọwo otu n’ime obodo ndị malitere imikpu ngwa ngwa karịa obodo ndị ọzọ n’ụwa ndị ọzọ. Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, a na-eme atụmatụ na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị mmadụ nwere ike imikpu na 2050 ma ọ bụrụ na ọkwa nke oke osimiri ugbu a na-aga n'ihu. Ya mere, ọ maara na ọ fọrọ nke nta zuru ezu n'aka na Jakarta sinks.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe nsonaazụ mgbanwe mgbanwe ihu igwe na-emetụta oke ịrị elu mmiri na ihe kpatara Jakarta ji na-agba mmiri.
1 Gini mere Jakarta ji emikpu?
3 Jakarta sinks na ọgwụgwọ ndị enwere ike
4 Obodo na-asọ oyi
Gini mere Jakarta ji emikpu?
Anyị maara na mgbanwe ihu igwe na-eme ka okpomọkụ nke mbara ụwa dum na-abawanye n'ihi okpomọkụ ụwa. Ọtụtụ iri afọ nke mmanwụ fosil na oke mmiri nke mmiri dị n'okpuru ala, yana ịrị elu oke osimiri na usoro ihu igwe na-arịwanye elu na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri. Ọ na-egosi na mpaghara dị iche iche nke ọwụwa anyanwụ Jakarta na-amalite ịla n’iyi n’ihi ịrị elu nke oke osimiri.
Buru n'uche na e wuru Jakarta na mpaghara ala ọma jijiji na ala mmiri. Na mpaghara a Osimiri 13 na-ezukọ na njikọta, ya mere ala na-enwekarị nsogbu. Anyị ga-agbakwunye na eziokwu a ịdị adị nke nnukwu okporo ụzọ, ọnụ ọgụgụ buru ibu na atụmatụ ogbenye obodo mepere emepe. Jakarta na-emikpu n'ihi na ọ nweghị usoro mmiri pọmpụ n'ebe ugwu, n'ihi ya, ụlọ ọrụ ndị dị n'ógbè ahụ na ọtụtụ nde ndị ọzọ bi na ya na-eji mmiri aquifers n'okpuru ala.
Na nrigbu ndị a n'okpuruala aquifers ha nwere ụfọdụ nke mmetụta na-eme ka Jakarta imi. Ọ bụrụ na anyị ewepụta mmiri dị n’ime ala n’ụzọ a na-achịkwaghị achịkwa, anyị ga na-eme ka ala a ghara ịkwado anyị. Ala elu ala ga-enyefe na enweghị nkwado nke nwere ike ịkwado ibu ahụ. Ya mere, njupụta na nnukwu mmịpụta mmiri ga-eme ka ala daa. Nke a na-eme Jakarta nke abụọ ruru 25 centimeters kwa afọ na mpaghara ụfọdụ ebe ha kacha nwee nsogbu. Kpụrụ enyemaka ndị a bụ okpukpu abụọ karịa nkezi ụwa maka isi obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri.
Anyị maara nke ahụ ụfọdụ akụkụ nke Jakarta dị ihe dị ka mita 4 n'okpuru ala. Nke a gbanwere odida obodo ma mee ka ọtụtụ nde mmadụ ghara ịdaba na ọdachi ndị na-emere onwe ha dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na mgbanwe ihu igwe na-agbaze oghere ice nke glaciers gburugburu ụwa, oke osimiri ga-ebili karịa afọ. Ka oge na-aga, nsogbu ndị ọzọ ga-adị na Jakarta sinks.
N'ịbụ ndị ọnọdụ dị otú ahụ chere, a na-ahụkarị idei mmiri, karịchaa n'oge udu mmiri nke mba ebe okpomọkụ. Amụma na-eme atụmatụ na nsonaazụ nke ide mmiri na-akawanye njọ dịka oke osimiri na-arị elu n'ihi okpomoku ụwa. Ala dị ala karịa maka oke osimiri na ka ọ na-arị elu, ọ ga-ebute oke ma bụrụ ihe dị ize ndụ. Ọ bụghị naanị na akụnụba ga-agbanwe, mana a ga-enwekwa ọpụpụ n'ike nke ndị bi na mpaghara ndị dị n'ime ime.
E nwere mpaghara Jakarta ejirila n'ihi ịrị elu nke oke osimiri ma mee ka mmiri mikpuo n'akụkụ ụfọdụ nke obodo ahụ.
Jakarta sinks na ọgwụgwọ ndị enwere ike
Otu n'ime ọgwụ ndị akwadoro iji belata ọnọdụ a anyị nwetara nnabata nke atụmatụ na-ezube iwu agwaetiti wuru na Jakarta Bay. Agwaetiti ndị a ga-arụ ọrụ dị ka ihe nchebe megide Osimiri Java ma mee ka ịrị elu nke oke osimiri ghara ịdị na mberede. A na-atụ arokwa ka ị wuo nnukwu mgbidi dị n'ụsọ oké osimiri. Agbanyeghị, n'ọnọdụ a enweghị nkwa na atụmatụ atụmatụ a mmefu ego nke $ 40 billion nwere ike idozi nsogbu nke obodo ahụ na-ekpu.
Anyị maara na Jakarta na-emikpu, ma agbanyeghị ọrụ nke a site na igbu oge ọtụtụ afọ nke ga-eme ka iwu ụlọ sie ike karị. A nwalewo ihe mgbochi iji belata mmetụta nke ịrị elu oke osimiri. E wuru mgbidi siri ike n'akụkụ ụsọ oké osimiri na mpaghara Rasdi na ọtụtụ ndị ọzọ nwere nnukwu nsogbu. Agbanyeghị, mgbidi ndị a agbasiela ma gosipụta ihe enyemaka. Ọ gaghị ekwe omume igbochi mmiri ịbanye na ịmalite ịmepụta mgbawa. Mmiri na-asọba na mgbidi ndị a ma na-ekpuchi mmiri niile nke n'okporo ámá ndị dị warara na ụlọ ndị dị na mpaghara ndị kasị daa ogbenye n'obodo ahụ. Ihe a nile site na enweghi nhicha na mmefu ego.
Ebe ọ bụ na usoro gburugburu ebe obibi dị ugbu a enwechaghị mmetụta, ndị ọchịchị na-achọ usoro ndị ọzọ ka sie ike. Ihe a bụ na mba ahụ ga-achọ isi obodo ọhụrụ ọzọ. Enwere ike ikwupụta ọnọdụ ahụ n'ụzọ doro anya, ndị kasị dịrị nchebe bụ nnyefe nke obodo ahụ dum n'àgwàetiti Borneo.
Ọ bụ ihe ịma aka siri ike ịkwaga obi nchịkwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba ahụ, mana ọ nwere ike ịbụ nchekwa mba. Buru n’uche na atụmatụ a dị oke egwu ma na-ada ka ọnwụ Jakarta.
Obodo na-asọ oyi
Ọ bụghị naanị na Jakarta na-emikpu, mana enwere obodo ndị ọzọ mepere emepe. N’ụwa nile enwere obodo ndị nwere oke osimiri nke nwere nsogbu nke nsogbu oke osimiri na mgbanwe ihu igwe. Obodo sitere na Venice na Shanghai, New Orleans na Bangkok. Obodo ndị a niile nwere ike ịda, mana ekwesiri iburu n’obi na Jakarta emechabeghị ihe ọ bụla banyere nsogbu a.
Ka anyị ghara ichefu na mgbanwe ihu igwe abụghị naanị na-abawanye oke osimiri, kamakwa ugboro ugboro nke oké ifufe nke na-ebute nnukwu ọdachi na obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere panorama nke Jakarta na-agba mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Jakarta sinks